Home Wararka Dekaddaha Taliyaaniga iyo iyo Malta oo loo diiday Muhaajiriin inay ka...
Dekaddaha Taliyaaniga iyo iyo Malta oo loo diiday Muhaajiriin inay ka degtaan
Dooni sidda Muhaajiriin ayaa waxa ay ku xayiran tahay xeebaha dalka Talyaaniga sidda ay shaaciyeen Hay’addaha u dooda xuquuqda Muhaajiriinta.
Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in aysan qaabili doonin Muhaajiriintaasi oo badankooda kasoo jeedda Qaaradda Afrika laakiin ay haboon tahay in dowladda Malta ay qaadato Mas’uuliyiinta dadkaasi.
Xukuumadda Malta ayaa sheegtay in doonni kalluumaysi oo loox ka samaysan oo ay saaran yihiin 450 ay doonayso in ay ku xirato jasiiradda Lampedusa.
Waxay sheegtay in doonidaasi ay haatan ku jirto badda Talyaaniga Maltana ay waajibaadkii ka saarnaa gudatay.
Dowladda Talyaaniga waxaa ay sheegtay in doonidaas aan loo ogolaan doonin in ay ku xirato dekadaha Talyaaniga.
Muran xooggan ayaa ka taagan Cidda qaabili doonta Qaxootigaasi oo hadda ku jira Xaalad adag , Maadaama Muddo badan ay badda ku jireen sidda ay sheegtay Hay’adda laga leeyahay Jarmalka.
Wasiirka arimaha gudaha Talyaaniga ee siyaasadihiisu midigta fog yihiin, Matteo Salvini, ayaa ku adkaysanaya in muhaajiriintaasi ay ka ka degaan dekadaha Malta.
Bishii hore ayaa Malta waxa lagu dirqiyey in ay ogolaato in markab u shaqeeya urur samofal oo Jarmal ah oo ay saarnaayeen in ka badan laba boqol oo qof oo muhaajiriin ahi uu ku xirato dalkeeda, hase yeeshee dhawr maalmood oo iyada iyo Talyaanigu arintaa isku mari waayeen ka dib ayaa markabkaasi wuxuu markii dambe u shiraacday xagga Faransiiska.
Previous articleJubbaland oo fariin udirtay MW Farmaajo
Next articleMW Farmaajo iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada oo kusii jeedda Brussels
Maxaa ka run ah hadalka Wasiir Cawad sababta loo ceyriyay Cabdullaahi...